Ikhabhinethi kaCooper kwi-Osborne Inn
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguBarbara
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uBarbara iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ikhabhinethi kaCooper e-Osborne Inn yeyona ndawo ifanelekileyo yokufumana indawo entle yeSixeko saseSpring, ngeenyawo okanye ngeebhayisekile. Nokuba zithini na izizathu zakho - nokuba kuphononongo lwembali, i-adventure, uthando, okanye ukuphumla - ukuhlala kwakho kwiKhabhinethi kaCooper e-Osborne Inn kuya kukukhumbuza ukuba ucothise isantya sakho kwaye ungcamle ubomi. Siyathemba ukuba ukuzola kweSpring City kunye nokufudumala kwenkonzo efunyenwe apha kuya kwenza i-Osborne Inn isithethe sakho.
Hamba uye kwiCabin kaCooper, indlu yoovulindlela esanda kubuyiselwa ngo-2012. Ifunyenwe kumabhodlo kwikona yangasemva yepropathi. Izigodo zabalwa yi-Snow College's Traditional Building Skills Institute kwaye zaphinda zahlanganiswa emva kwendawo yokulala. Le ndlwana, malunga no-1860, mhlawumbi yayimi ngexesha leMfazwe ye-Black Hawk apho uWilliam Osborne wayeligqala layo. Oovulindlela babengenakubuqonda ubunewunewu esibuthabatha lula eCooper’s Cabin.
4.84 · Izimvo eziyi-96
Embindini we-Utah, omiswe phantsi kweNtaba yeHorseshoe, sisiXeko sase-Spring: idolophu elityelweyo ngelo xesha. Yasekwa ngo-1852 nguJames Allred kwaye sisithili sembali yesizwe esibhalisiweyo esinawo wonke umtsalane woluntu lwenkulungwane ye-19. Idolophu "ibhala umzobo ubuchule bokucwangciswa kwedolophu yaseMormon e-Utah" kwaye "uyilo lugcinwe kakuhle ngokumangalisayo kunye nentabalala yezakhiwo zonqulo, amakhaya kunye neendawo ezincinci zorhwebo ezandulela iMfazwe yeHlabathi yokuQala" (iRejista yeSizwe yeNgxelo yeZithili zeMbali). Abemi bokuqala besiXeko saseSpring ubukhulu becala yayingamaScandinavia, ephembelela uninzi loyilo loyilo lwezakhiwo. Idolophu igcina umoya ofanayo nowawunjalo xa yayiqala ukusekwa.